Global Aawaj | बुटवलमा अत्यावश्यक सामग्रीका पसल कुन–कुन दिन खुल्छन् ? बुटवलमा अत्यावश्यक सामग्रीका पसल कुन–कुन दिन खुल्छन् ?
बुटवलमा अत्यावश्यक सामग्रीका पसल कुन–कुन दिन खुल्छन् ?
६ जेष्ठ २०७७ 12:34 pm
बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाले लकडाउनलाई समय तालिका बनाएर व्यवस्थित गरेको छ । अनावश्यक रुपले घरवाहिर निस्कने र विहानी र रात्री हिडाईलाई निरुत्साहित गर्न र असुरक्षित रुपले सामान खरिद विक्री कार्यलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा सामाजिक दुरी पालना गर्न कडाई गरेको हो ।
खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल पसलहरु हप्तामा ३ दिन, विहान ९ बजे देखि २ बजेसम्म आइतवार, मंगलवार र विहीवार खोल्न पाइने भएको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको हरियो ताजा तरकारी र फलफुल स्थानीय पालिका मार्फत स्थानीय उत्पादन भनी सिफारिस गरेको आधारमा र बुटवल उपमहानगरभित्रको भए सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको आधारमा घरघरमा डुलाई विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म विक्री वितरण गर्न पाइने नियम बनाइएको छ ।
उपमहानगरद्वारा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना अनुसार कृषि कार्यसँग सम्बन्धित कार्यका लागि आवश्यक मल,विउ,औषधी पसल आइतवार, मंगलवार र विहीवार विहान ९ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म खोल्न पाइने छ । दुध तथा डेरी उत्पादन प्रत्येक विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र वेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म विक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुध विक्रेताले उत्पादन, संकलन गरेको स्थल खुलेको सम्बन्धित पालिका वा वडावाट भएको सिफारिस साथमा ल्याउनुपर्ने छ ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित माल सामान विक्री गर्ने हार्डवेयर पसल हप्तामा ३ दिन आइतवार, मंगलवार, विहीवार विहान ९ बजेदेखि २ बजेसम्म खोल्न सकिने भएको छ । सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत पूर्वाधार विकासका कार्यहरु सुरक्षा र सामाजिक दुरीको सुनिश्चितता कायम गरी कामको प्रकृति हेरी समय मिलाएर सबै दिन गर्ने तर कामदार श्रमिकहरुको परिचय खुलेको अभिलेख राखेको हुनुपर्ने छ ।
कृषि औजार उपकरण तथा साधन र ढुवानी साधनको मर्मत सम्भार ५ जनाभन्दा बढी मिस्त्री नरहने गरी प्रत्येक दिन विहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म संचालन गर्न सकिने भएको छ । नदीजन्य पदार्थको ढुवानीका लागि प्रत्येक दिन विहान ९ बजेदेखि वेलुका ६ बजेसम्म संचालन गर्न पाइने भएको छ ।
वैक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरु प्रत्येक आइतवार, मंगलवार र विहीवार विहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्न सकिने छ । आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित गर्न लकडाउनको पालना र सामाजिक दुरी कायम गर्न उपमहानगरले आग्रह गरेको छ ।